Nei Mwari Achibvumira Kutambura? | Kukurukura Nemuvakidzani
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tatar Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
MWARI ANONZWA SEI NOKUTAMBURA KWEDU?
Michelle: Hesi Sophia. Ndafara kukuona uri pamba.
Sophia: Neniwo ndafara kuti wauya.
Michelle: Pandakapedzisira kuuya takakurukura nezvokuti Mwari anonzwa sei nekutambura kwedu. * Wakataura kuti nyaya iyi yava nenguva refu ichikunetsa, kunyanya pashure pekukuvara kwakaita amai vako mutsaona yemotokari. Ivo vari sei?
Sophia: Zviri kungodarodaro. Asi nhasi vari nani.
Michelle: Ndafara kunzwa kudaro. Zvinofanira kunge zvakaoma zvikuru kuti uve netariro kana zvinhu zvakamira saizvozvo.
Sophia: Zvakaoma. Ndinombonetseka kuti vacharamba vachitambudzika kusvika rinhi.
Michelle: Vakawanda vanodaro. Kana uchiri kuyeuka, pandakapedzisira kuuya ndakakusiira mubvunzo nezvaMwari, kuti nei achibvumira kuti vanhu varambe vachitambura kana aine simba rokukugumisa.
Sophia: Ehe, ndichiri kuyeuka.
Michelle: Tisati takurukura zvinotaurwa neBhaibheri panyaya yacho, ngatimbodzokororai pfungwa shoma pane zvatakakurukura.
Michelle: Takadzidza kuti mumwe murume aiva akatendeka anotaurwa muBhaibheri akatonetsekawo kuti nei Mwari achibvumira kutambura. Asi Mwari haana kumutsamwira kuti abvunzirei, kana kumuudza kuti aifanira kuwedzera kutenda kwake.
Sophia: Izvozvo ndaisazviziva.
Michelle: Takadzidzawo kuti Jehovha Mwari haafari patinotambura. Somuenzaniso, Bhaibheri rinotaura kuti vanhu vake pavaitambudzika, “naiyewo akanga achitambudzika.” * Hazvinyaradzi here kuziva kuti Mwari anotinzwira tsitsi patinotambura?
Sophia: Ehe zvinonyaradza.
Michelle: Takazobvumirana kuti zvechokwadi Musiki wedu anokwanisa kupindira ogumisa kutambura chero nguva, tichifunga nezvesimba rakakura raainaro.
Sophia: Ipapo ndipo pandisinganzwisisi. Sei Mwari achirega zvakaipa zvose izvi zvichiitika, iye aine simba rokuzvipedza?
NDIANI AITAURA CHOKWADI?
Michelle: Kuti tiwane mhinduro yemubvunzo wako, tinogona kutanga nekuvhura bhuku rekutanga remuBhaibheri raGenesisi. Unoziva nyaya yaAdhamu naEvha nemuchero wakarambidzwa here?
Sophia: Ehe, ndakaidzidza kusandesikuru. Pane muti wavakanzi naMwari vasadye, asi ivo vakaudya.
Michelle: Ndizvozvo. Saka ngatimboonai zvakaitika kuzosvika Adhamu naEvha vatadza. Izvozvo zvinotibatsira kuziva kuti nei tichitambura. Ndinokumbirawo kuti uverenge pana Genesisi chitsauko 3, ndima 1 kusvika 5.
Sophia: Horaiti. “Zvino nyoka ndiyo yakanga yakachenjera kupfuura mhuka dzose dzomusango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Naizvozvo yakati kumukadzi: ‘Ichokwadi here kuti Mwari akati hamufaniri kudya miti yose yomumunda?’ Mukadzi akati kunyoka: ‘Tingadya hedu michero yemiti yomumunda. Asi kana kuri kudya muchero womuti uri pakati pomunda, Mwari akati, “Musaudya, kana kuubata kuti murege kufa.”’ Nyoka ikati kumukadzi: ‘Chokwadi hamungafi. Nokuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa uye muchava vakafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.’”
Michelle: Waita basa. Ngatimboongorai ndima idzi. Kutanga, ona kuti nyoka yakataura nemukadzi, Evha. Bhaibheri rinoratidza kuti aitova Satani Dhiyabhorosi aitaura naEvha achishandisa nyoka. * Satani akabvunza Evha nezvemurayiro waMwari pamusoro pemumwe muti. Waona here kuti Mwari akanga ati Adhamu naEvha vaizopiwa chirango chei kana vaizodya muchero wemuti wacho?
Michelle: Ndizvozvo. Satani akabva apomera Mwari. Ona kuti akati chii: “Chokwadi hamungafi.” Nemashoko aya, Satani akataura kuti Mwari murevi wenhema!
Sophia: Izvozvo handina kumbobvira ndakazvinzwa.
Michelle: Uye Satani paakataura kuti Mwari murevi wenhema, akatanga nyaya yaitoda nguva kuti igadziriswe. Uri kuona here kuti nei paidiwa nguva?
Sophia: Aaa. Handizivi.
Michelle: Horaiti, ndinogona kuzvienzanisira seizvi. Ngatitii mumwe musi ndinouya kwauri ndobva ndakuudza kuti ndine simba rinodarika rako. Ungaratidza sei kuti zvandinenge ndataura hazvisi zvechokwadi?
Sophia: Ndinogona kuti ngatiite chimwe chinhu chinoratidza kuti ane simba ndiani.
Michelle: Ndizvozvo chaizvo. Tinogona kusarudza chimwe chinhu chinorema, toona kuti ndiani wedu anogona kuchisimudza. Saka, zviri nyore kuratidza kuti ane simba kupfuura mumwe ndeupi.
Sophia: Ndiri kunzwisisa zvauri kutaura.
Michelle: Ko ndikati ndinotaura chokwadi kupfuura zvaunoita? Inenge yatova nyaya yakasiyana handiti?
Sophia: Ehe, ndofunga.
Michelle: Nyaya yekutaura chokwadi haigoni kungopedzwa nyore nyore sezvinoitwa yekuratidza kuti ane simba ndiani.
Michelle: Saka, nyaya yacho inogona kungopedzwa nokubvumira nguva yokuti vamwe vambotiongorora tose uye voona kuti ndiani wedu anonyatsotaura chokwadi.
Sophia: Izvozvo zvine musoro.
Michelle: Iye zvino, chitarisa zvakare nyaya iya iri muna Genesisi. Satani akataura kuti aiva nesimba rinodarika raMwari here?
Michelle: Mwari angadai akabva angoratidza kuti Satani aireva nhema. Asi Satani akataura kuti iye aitaura chokwadi uye Mwari murevi wenhema. Anotoita seakati kuna Evha, ‘Mwari ari kukunyeperai, asi ini ndiri kukutaurirai chokwadi.’
Michelle: Neuchenjeri hwake, Mwari akaziva kuti zvaida nguva kuti agadzirise nyaya yacho. Zvaizonyatsobuda pachena nokufamba kwenguva kuti ndiani aitaura chokwadi uye ndiani aireva nhema.
Sophia: Asi Evha paakangofa, hazvina kubva zvabuda pachena here kuti Mwari ndiye aitaura chokwadi?
Michelle: Ehe, zvakabuda pachena. Asi paivawo nezvakawanda zvaibatanidzwa pamashoko akataurwa naSatani. Tarisa zvakare pandima 5. Uri kuona here zvimwe zvakaudzwa Evha naSatani?
Sophia: Akati kana aizodya muchero wacho, maziso ake aizosvinudzwa.
Michelle: Ehe, uye kuti aizova ‘akafanana naMwari, achiziva zvakanaka nezvakaipa.’ Saka Satani akataura kuti Mwari ainyima vanhu chimwe chinhu chakanaka.
Sophia: Hoo nhai.
Michelle: Uye iyoyo yaitovawo nyaya yakakura zvikuru.
Michelle: Satani aireva kuti Evha, uyewo vanhu vose vaikwanisa kuva neupenyu hwakanaka vasingatongwi naMwari. Uye Jehovha aiziva kuti nzira yakanakisisa yekugadzirisa nayo nyaya yacho yaiva yekubvumira Satani kuti aratidze kana zvaaitaura zvaiva zvechokwadi. Saka Mwari akabvumira Satani kuti ambotonga nyika kwenguva yakati. Satani ndiye ari kutonga nyika ino, kwete Mwari, ndicho chikonzero nei tichiona kutambura kwakawanda mazuva ano. * Asi pane mashoko anofadza.
Sophia: Ndeekuti chii?
Michelle: Bhaibheri rinodzidzisa chokwadi chinofadza nezvaMwari. Chokutanga, Jehovha ane hanya nesu patinenge tichitambura. Somuenzaniso, funga nezvemashoko aMambo Dhavhidhi akanyorwa pana Pisarema 31:7. Dhavhidhi akatambura kakawanda muupenyu hwake, asi ona zvaakataura paainyengetera kuna Mwari. Ndinokumbirawo kuti uverenge ndima yacho.
Sophia: Horaiti. Panoti: “Ndichafara nokufarira kwazvo mutsa wenyu worudo, pakuti makaona kutambudzika kwangu; makaziva nezvokutambudzika kwomweya wangu.”
Michelle: Saka kunyange zvazvo Dhavhidhi aitambudzika, ainyaradzwa nokuziva kuti Jehovha aiona zvese zvaiitika kwaari. Hazvinyaradzi here kuziva kuti Jehovha anoziva zvese, kunyange zviya zvisinganyatsonzwisiswi nevamwe vanhu, zvakadai sekurwadziwa kwatinoita mumwoyo?
Michelle: Chechipiri ndechokuti Mwari haazobvumiri kuti tirambe tichitambura nokusingaperi. Bhaibheri rinodzidzisa kuti nokukurumidza achagumisa utongi hwakaipa hwaSatani. Uye achabvisa zvachose zvakaipa zvese zvave zvichiitika, kusanganisira kutambura kwamave muchiita, iwe naamai vako. Zvinoita here kuti ndidzoke vhiki inouya ndokuratidza kuti nei tingava nechokwadi kuti Mwari achagumisa kutambura kwese nokukurumidza? *
^ ndima 7 Ona nyaya yakanzi “Kukurukura Nemuvakidzani—Mwari Ane Hanya Nokutambura Kwedu Here?” iri mumagazini yeNharireyomurindi yaJuly 1, 2013.
^ ndima 17 Ona Isaya 63:9.
^ ndima 26 Ona Zvakazarurwa 12:9.
^ ndima 55 Ona Johani 12:31; 1 Johani 5:19.
^ ndima 61 Kuti uwane mamwe mashoko, ona chitsauko 9 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nei Mwari Achibvumira Kutambura?